Munamato kuna Santa Barbara. ? Kune Mari, Rudo uye Kudzivirirwa.
8 Kuverenga Min
Munamato kuna Santa Barbara. Akatambura pakati pevamwe vakadzi vepasi Santa Barbara akakodzera kuyemurwa kwedu sezvo akaona kuvenga kwemunhu iye aifanira kunge aimuda. Simudza imwe munamato kuna Santa Barbara Inogona kutibatsira mune dzakawanda zviitiko uye kunyangwe kune kune kwatakarasikirwa netariro.
Hupenyu hwake pasi pano kutenda kwakazara nekurwadziwa nekutambura, zvakadaro, akaramba ari muhondo nekurwa yake yega uye kunyangwe kumuvengi wake kukundwa aive ave pedyo, akawana korona yekuenda iyo yakavimbiswa kune vatsvene vakatendeka avo Vanorwa nemoyo.
Mukadzi wekutenda kusingazungunuke, akasimba, akatendeka uye shamwari yedu panguva dzekushungurudzika.
1 Munamato kuna Santa Barbara
1.1 Santa Barbara munamato wemari
1.2 Munamato Saint Barbara wakaropafadzwa nerudo
1.3 Munamato kuna Saint Barbara wakaropafadzwa nekuda kwekudzivirirwa
1.4 Kune vavengi
1.5 Kutonga mumwe wako asina kutendeka
Akararama pasi pano munguva dzezana ramakore rechitatu muAsia Minor.
Muhupenyu hwake akatambura zvakanyanya nekuda kwezvaaitenda zvechitendero kubva zvavakaenda kunopesana nevemhuri yake. Nhoroondo inotaura kuti baba vake vaive muvengi akasimba wechiKristu panguva iyoyo, chinamato icho chainzi naBarbara zvakasununguka.
Aive iye, Dioscoro, baba vake, avo vakamupfigira mutara refu kwazvo sechirango chekusiyana kwake kwechitendero.
Munguva yaiita kuti arambe akavharirwa aive akatendeka pakutenda kwake, akabhabhatidzwa uye akaparidza chitendero chake nguva dzese.
Zvinonzi izvozvo shongwe Yaive nehwindo rimwe chete uye akaraira mamwe maviri kuti avhurwe sechiratidzo che utatu hwamwari.
Baba vake pavakadzoka, vakamutongesa ndokugamuchira kusabatwa uye kunyadziswa uye aive Dioscoro iye amene akagura musoro wake nebakatwa rake pamusoro pegomo. Zvinonzi mushure mekuponda uku ranzi rakabva kudenga rakamurova rikatora hupenyu hwake.
Santa Barbara munamato wemari
Anesimba Santa Barbara, murwi, ndibatsireiwo kuhondo iyi.
Iwewe hauna kupinda mukuyedzwa kwechakaipa, iwe waiti nerudo rwako, nese dambudziko, uchibuda uchikunda, ndinokumbira undireverere kuna ISHE, Tenzi wedu, kuti mundibatsire kupindirana nenguva ino yaanondiedza.
Dai iye, kubva kunzvimbo yake yekugara, andipe simba zvakakwana apo pakanaka anenge ari iye anokunda.
(Ita Chikumbiro chako Chokutanga Mari)
Tenzi, kuti makapa Santa Barbara simba rinoshamisa rekutsungirira kutyisa uye kutambudzika kukuru nekuda kwekutendeka Kwenyu, tinokumbira kuti, saiye, isu takasimba mukutambudzika uye tizvininipise mukubudirira kuti tiite senge kurumbidza kusingaperi.
Kuburikidza naJesu Kristu, Ishe wedu.
(ita wako wechipiri Mari Chikumbiro)
Haraiwa Barbara, uyo wakacheka humhandara hwako hwakachena nehurongwa hweropa rako nekuda kwerudo rwaIshe, ndirwirei kubva kumatutu, moto, njodzi nematambudziko ese epanyika.
Ndinunure kubva rufu pakarepo. Ndirevererei kunaIshe kuti vandibatsire kuwana budiriro muhupenyu huno, kurarama muushamwari hutsvene uye kusvika kumagumo emazuva angu murunyararo munyasha dzaMwari.
(ita chikumbiro chako chemari chechitatu)
Ino Santa Barbara munamato wemari wakasimba kwazvo!
Iye akatidzidzisa kuvimba naMwari, kutenda kuti zvaakavimbisa zvinozadzika uye kurarama muzvakawanda nezvidiki. Iye akatambura urombo Zvinogona kutibatsira kuti tibudirire.
Kunamatira mari kuti iuye kwatiri panguva ino yedambudziko kunokosha uye kukumbira Santa Barbara mukutenda chiito chekuteerera chatinofanira kuita zuva nezuva.
heyi minamato kana minamato Ivo vanogona kutitungamira kubvunza nenzira kwayo. Nekudaro, chakakosha uye vimbiso chete yatinayo yekuziva kuti munamato wedu wakanzwika ndeyekuchengeta kutenda kurarama.
Munamato Saint Barbara wakaropafadzwa nerudo
Hondo yekumatenga, akaropafadzwa Saint Barbara, teerera kukumbira kwangu kwerudo kuti ..
(taura zita rako nere remudiwa wako)
Kubatana mumuviri nemweya, kuvadzivirira kuitira kuti pasave neanopinda munzira yavo yemufaro uye mubatanidzwa. Akakomborerwa Saint Barbara anozodza bvudzi ra (dzokorora mazita) pedza nyota yavo neako infinito rudo rwezvishuwo zvavo kururamisira kwakasimba kwesimba risingabviri kurwira ava vadikani vekusingaperi (dzokorora zita rako neiya romudiwa wako).
RUDO rwakava chimwe chezvinhu zvinokonzera mufaro nekusuwa zvakajairika kubva pakutanga kwenguva uye kusvikira nhasi.
Kuda kwaSanta Barbara kwababa kwakarambwa kumwanasikana wake uye izvi zvakaita kuti aite seanotemesa musoro sekutemwa kwemwanasikana wake chaiye.
Hapana mumwe ari nani kupfuura iye, angave achivengwa nani aisafanira kuzviita, kuti anzwisise kurwadziwa kwedu muchiitiko chekuti haasi kudzoreredzwa murudo.
Munamato uyu unogona kutibatsira kusunungura kubva pasimba rakashata kuitira kuti rudo ruuye kwatiri uye titishamise.
Munamato kuna Saint Barbara wakaropafadzwa nekuda kwekudzivirirwa
Holy Barbara, mhandara yakaropafadzwa, ine simba rakakura, dai Mwari ave newe, uye neni neni munzira yezvakanaka.
Ndirwirei nebakatwa renyu rinokunda, ndisunungure pane zvakaipa, kusaruramisira, godo nemeso akaipa. Nesimba remheni, mundichengetedze kubva kuvavengi vangu, rumbidzai muromo wemoto wechero rangu uye riite kuti rikure richikunda.
Nemukombe wemukombe wako newaini chengetedza simba remuviri wangu pamwe nemweya wekurwa kwakaoma nekurwa.
Gamuchira maapuro angu nema daisies sechipo chandinogara ndichifunga mundangariro dzangu uye mumba mangu, uye ndinokukumbira, usandisiye zvachose uye uuye kwandiri chero pandinenge ndichiti iwe udzivirire kutenda kwangu, nyika yangu, mhuri yangu neyangu kunetsana; uye kuti pakupedzisira unogara uchindiendesa pakubwinya senge.
Uyu ndiwo munamato wakanaka weWakaropafadzwa Barbara kuchengetedza Santa.
Chishandiso chatinogona kushandisa kana tichichiida, munamato zvakare inova nhoo yedu uye kwete chete panjodzi asiwo nekuzvidza zvese zvakashata izvo hupenyu hwedu kana izvo zvemhuri dzedu zvinoda kuzadzisa.
Kune ufakazi hwakawanda hwevatendi vakatendeka avo vakagamuchira mhinduro panguva kubva kuSanta Barbara panguva yekushungurudzika, isu tikakumbira kuchengetedzwa isu pachedu kana nhengo yemhuri inova inoshanda.
Ah mwari! kubva parutivi rwangu, neupenyu hwangu, izvo zvakaipa zvakaipa zvinoshungurudza, zvinorindira.
Ini ndinouya kwauri, Santa Barbara kuti ndivavhiringidze, uvaparadzanise neni kuti arege kundikuvadza uye ini ndinochema nekutenda ndikupe hupenyu hwangu.
Iwe, unokudza kwazvo murume, anokomborerwa anobatsira weiye anokukoka uye muKristu ane rupo anovhura chipfuva chako kune vanhu vakanaka, ndipe rubatsiro rwako, maari ndinopinda uye kubva kwaari ndichabuda neropa remwoyo wako, kuti ndizvisunungure kubva kwavari .
Bvisai kwandiri godo nekupengesa, ndidzivirire, ndinokumbira zvakaipa kubva kuvavengi uye vavengi, kuti zvakaipa zvisandibata uye kuvenga hazvindikuvadze, chengetedza muvakidzani akaipa uye shamwari yakaipa, nyonganisa vavengi vangu kuti varege kundimanikidza, ndibatsireiwo kutonga chero munhu akandida zvakaipa kuti ndikwanise kukunda chero mamiriro ezvinhu anondikuvadza.
Usavarega vachivhiringidza kufora kwechiKristu uye kana vachiramba, gehena chirango semubhadharo weuipi hwavo.
Ndisunungurei chitsvene Barbara akaropafadzwa kubva pane zvakaipa zvese, ndisunungurei chitsvene Barbara akaropafadzwa kubva kuvavengi vese, chengetedza hupenyu hwangu kubva mukukuvadzwa kuti ndigone kurarama murunyararo uye kugadzikana. ZvaJesu nemhandara.
Tora mukana wesimba reiyo inotonga Santa Barbara munamato wevavengi.
Tese tinazvo vavengi uye kunyange mumba medu. Tinozviona munhoroondo yeSanta Barbara sezvo baba vake vakamurwisa kusvika parufu.
Iwe unogona kunge usiri kutambudzika nekurwiswa zvakananga seizvi asi haufanire kumbotsamira vavengi.
Munamato wekutonga kwevavengi unosimuka uchienda kuSanta Barbara ingave chete nzira yatinofanira kuzvisunungura kubva mukutambudzwa nengozi.
Kutonga mumwe wako asina kutendeka
Akakomborerwa Santa Barbara iwe unogona kuita kuti vanhu vazhinji vayanane, mundiitirewo kadiki, ini ndichawana rudo, ndoita moyo wangu wakanaka uye wechokwadi, ita rudo, mumoyo mangu unogona kupinda nekundizadza nemufaro, ndinoda kukwanisa kuziva rudo rwechokwadi, kunzwa kwechokwadi, Santa Barbara iwe une simba rakawanda mairi, ndipe iyo nyasha, dai chikumbiro changu chiuye kwauri, kuti ndigamuchire maropafadzo ako, Santa anoda, erudo rwakakwana pasina manyepo, iwe kuti iwe une hunhu uye iwe unoshamiswa kwazvo nezvose nyika Huya kwandiri undipe mukana wekugamuchira maropafadzo ako, ndinoda imwe nguva kubva kwauri kutumira minamato yangu.
Minamato yangu kuna Mwari kuti akwanise kuita hupenyu hwangu huzere nerudo, izere nerunyararo muite kuti zvishamise Santa Barbara, ndinokumbira mundipewo rudo, rudo rwakawanda uye rudo rwakawanda, mufaro wakawanda mufaro, zvakanaka zvido, pfungwa dzakanaka, zviito zvakanaka, ndibatsireiwo kukunda mukati mazvo, rudo, zvichave kwandiri senhanho, gwara, Santa Barbara, iwe unogona kuita zvese, ndipe uye uve nechokwadi kunzwa kwerudo uuye kwandiri, vimba nesimba rako uye rako nokunaka, ameni.
Rudzi urwu rwemunamato ruchiri kushoropodzwa zvakanyanya nevamwe vanofunga kuti chiito choudyire chinoitwa kubva mukuzvikudza kwekukuvara kana kusiiwa. Asi ichi hachisi chokwadi.
Kunyengeterera kuti utonge pamusoro pemumwe munhu kana mamiriro akada kuita chiitiko cherudo chinobva mukupererwa nezano rekuda kuita chishamiso uye kutadza kuchiwana.
Munamato unoitwa uchitenda uchagara uchigamuchira mhinduro yauri kukumbira, chero chinhu chauri kukumbira, Wakakomborerwa Saint munamato munamato une simba.
Munamato kuMutsvene Michael Mutumwa mukuru